कांग्रेसले नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई गोरखा-२ प्रतिनिधिसभा - Mero HeadlineThe News portal of Pokhara
१७ कात्तिक, गोरखा । भूकम्पले घर भत्किएपछि बनाएको टहरोमा नेपाली कांग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टीको संयुक्त झण्डा राख्दै बारपाकका मनबहादुर घलेले भने, “स्थानीय तह निर्वाचनमा जुन पार्टीले असहयोग गर्‍यो उसैको झण्डा धुरीमा सजाउनुगर्‍यो ।”
नेपाली कांग्रेस बारपाक कार्यसमितिका सभापति रहेका घले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा पराजित भएका थिए । अहिले उनी कांग्रेस र नयाँ शक्तिको संयुक्त प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् ।
कांग्रेसले नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई गोरखा-२ प्रतिनिधिसभा र गोरखा २ (क) प्रदेश सभा छाडेर गोरखा १ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका साथै गोरखा २ को (ख) प्रदेशसभा लिएको छ ।
गोरखा २ र (क) प्रदेश सभामा कांग्रेसले नयाँ शक्तिलाई सघाउने र अन्य क्षेत्रमा नयाँ शक्तिले काँग्रेसलाई सघाउने गरी संयुक्त चुनावी घरदैलो अभियान सुरु भएको छ ।
अहिले ‘गोरखा भूकम्प’ को केन्द्र बारपाकमा मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनको रौनक देखिएको छ । गोरखा २ का उम्मेदवार डा भट्टराई, गोरखा २ प्रदेश सभा (ख) का उम्मेदवार कांग्रेसका प्रकाशचन्द्र दवाडी बारपाक पुगेपछि घरदैलो र चुनावी सभाले चुनावी रौनकता थपेको छ । डा. भट्टराई र दवाडी बुधबार र बिहीबार बारपाक रहेका थिए ।
बारपाकीले टहरामा झण्डा फहराएका छन् । बारपाकका जितबहादुर घलेले भने, “भर्खर चुनावी सभा तथा घरदैलो अभियान सुरु भएको छ । भोट कसरी हाल्ने भन्नेबारे वृद्धवृद्धालाई मतदाता शिक्षा दिन जरुरी छ । भोट कसरी हाल्ने हो भन्नेमा बारपाकी अन्योलमा छन् ।”
बारपाकीले विकास, निर्माणमा सहयोग पु¥याउने नेतालाई भोट दिएर जिताउने बताएका छन् । विगतमा खानेपानी, पक्की सडकलगायत विकासको आश देखाए पनि चुनाव जितेकाहरु फर्केर नआएको बारपाकीको गुनासो छ । घर बनाउन बालुवा चाल्दै गरेकी बारपाककी वृद्धा चिजमाया घलेले भनिन्, “वृद्धभत्ता बढाउने, गाउँमा अस्पताल खोल्न जसले सघाउँछ उसैलाई भोट दिन्छौँ ।”
उनले भने, “घर बनाउन १०/१५ लाख चाहिएला जस्तो छ । तर सरकारले तीन लाखमात्रै दिने भन्यो । कम्तीमा पाँच/सात लाख दिएको भए हुन्थ्यो ।”
भूकम्पपछि विस्थापित बारपाकीले सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सघाउने नेतालाई भोट दिने बताएका छन् । बारपाकको दलित बस्ती, स्नान र मान्दे्र बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
चुनावी घरदैलो अभियानका लागि बारपाक पुगेका गोरखा २ प्रदेशसभा क्षेत्र (ख) का उम्मेदवार दवाडीले भूकम्पपछिका पुनःनिर्माण, गाउँसम्म आउने सडक, नियमित बिजुलीलगायत विकासमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यस्तै घरदैलो अभियानका क्रममा बारपाक पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा गोरखा २ का प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार डा भट्टराईले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन सरकारले कम्तीमा पाँच लाखका दरले अनुदान दिनुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत बारपाकसम्म कच्ची सडक खुलाएको भन्दै डा भट्टराईले चुनाव जिताए एक वर्षभित्रमै बारपाकसम्म सडक कालोपत्र गर्ने बताए।